RIPPERS / THUMBS / RAKES ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebubata ya - China RIPPERS / THUMBS / RAKES Factory
Bonovo Link-on Hydraulic Thumb emegharịrị ka ọdịdị nke bọket gị ma mee ya nke igwe siri ike. Enwere ụdị dị iche iche. Ntughari 145 ruo 180.
Bonovo Mechanical Thumb na-enye usoro dị mma ma dịkwa ọnụ ala maka ijizi nkume, ahịhịa, stumps osisi, ọkpọkọ na ihe ndị ọzọ siri ike na-emegharị. Bulie ma debe ihe na njikwa zuru oke. Nke a bụ ngwa dị mkpa maka ịkwatu, ikpocha ala na ọrụ nchịkọta niile. Mechanical, hydraulic, weld-on na ụdị bolt niile dị.
Bonovo Rake dị mma maka mkpocha ngwa ngwa, njikwa ahịhịa, ikpocha ala / okwute ma wepụ ahịhịa na-achọghị na overgrowth. Enwere ike ihicha ihe ma dozie ya iji kpochapụ irighiri ahihia ma hapụ ezigbo ala ma ọ bụ ihe dị n'azụ. Ma uzo na uzo ihu.
Bonovo Pin-on Hydraulic Thumb ahaziri iche na igwe. Arụ ọrụ nke ọma na obere igwe nakwa dị ka nnukwu igwe. Integrated imewe na akụkụ efere na mkpịsị aka maka ukwuu ike, Pụrụ iche mkpịsị aka serration maka ubara ejide ikike.